September, 2017 | Otu Di na Nwunye
September 26, 2017 + ụlọ, Arts & Music, Nri na ihe ọṅụṅụ, History, Itineraries, North America, Tennessee, Nhazi njem, United States
Otu esi emefu 3 Days Na Nashville
Nashville enwewo nnukwu ọganihu n'ime iri afọ gara aga, ebe ọ bụ nnukwu aha ya dị ka musika mba. Ọ bụ ezie na ihe kpatara ya bụ ọtụtụ, tinyere nyochaghachi nke Nashville East East na ihe nkiri mmepụta ihe na-akpali akpali, ihe ndị a rụpụtara emewo ka azụmahịa ahịa njem dị ike. Ihe ọtụtụ ndị na-amaghị tupu ha gaa na Music City, Otú ọ dị, na Nashville na-enye ọtụtụ n'èzí ... GỤKWUO
September 9, 2017 + Arts & Music, Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, France, Ebe nkiri ebe nkiri, Ihe efu, History, Nhazi njem
Ihe Ndị Na-adịghị Mma Iji Mee na Paris
A na-echekarị Paris, na n'eziokwu, dịka otu n'ime obodo kachasị ọnụ ahịa ịga leta na Europe. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na ụlọ ngosi ihe ochie juru ebe niile ghọtara uru ha bara, ha abughi ọnụ ala. Ị chọrọ ịga ebe ahụ. Ya mere onye ọ bụla ọzọ, na Paris na-eme ka ndị njem nleta kwụọ ụgwọ ya. Otú ọ dị, Obodo nke Ìhè adịghị ọnụ, nri nri na ahịa ahịa anọ .... GỤKWUO